Buugga Cusub ee Diiwaanka Qosolka
Xaflado Buugga Cusub ee Diiwaanka Qosolka Loogu Wanqalayo, Laguna Soo Dhowaynayo Qoraagiisa Jamaal Cali Xuseen Muxuu Ku saabsaan yahay“Diiwaanka Qosolku”? Maxamed Baashe Xaaji Xasan
March 30, 2009 ____________________________
Buuggani waxa uu xog iyo aqoon kobocsan ku kordhinayaa dhallinyarada soo koraysa, gaar ahaan kuwooda qurbo-joogga ah oo uu tusayaa in ay Soomaalidu lahayd/ leedahayna sheekooyin qosol iyo murti leh oo lagu faani karo. Inta kalena (waayeelka) waxa uu xusuusinayaa waaya-waayo iyo waxyaalo ay illaaween, runtiina yiddidiilo iyo riyaaq gelinaya. Buuggu waxa uu ka kooban yahay shan qaybood oo muhiim ah oo u kala baxsan: Sheekooyin qosol iyo mahadhooyin leh Sheekooyin murti-suugaaneed oo qosol leh Sheekooyinka qosolka leh iyo haweenka Soomaaliyeed Sheekooyinkii qosolka lahaa ee Aw Xasan Sheekh Cismaan Nuur Sheekooyinka Qosolka leh ee Qurbajoogga iyo Saaxiibbadooda Qalaad Murti iyo suugaan kale ayaa iyada qudheedu aan ka maqnayn oo ku dhex filiqsan, waa buug laba boqol oo bog cagacagaynaya, in ku dhow 150 sheeko oo qosol iyo xigmad ku fadhiyaana dhex jiifaan.
Maxaa Laga Yidhi “Diiwaanka Qosolka?” Sheekooyinka buuggan “Diiwaanka Qosolka” ku jiraa waxay qofka ka fududaynayaan culays saaran, aadna waa looga helayaa. Waxa loo baahan yahay in sheekooyinka Buuggan ku jira loo tarjumo bulshooyinka aan furfurnayn sida caalamka Reer Galbeedka. Jamaal Cali Xuseen waxa uu ka mid yahay inta xiisaysa sheekooyinka noocan ah. Inta samaysa ee hibada u lehna waa ka mid. Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi): Abwaan Weyn, Mufaker Maansoole iyo Xeel-dheere Aqoonta Bulshada
Daraasado badan oo ku saabsan cilmi-nafsiga ayaa sheegaaya in qosolku yahay astaanta caafimaadka isla markaana qosolku kobciyo farxadda iyo himilada qofka. Bulshadu dhibaatooyinka nolosha waxay kaga gudbaan ama ay isku illowsiiyaan sheekooyin qosol, farxad, iyo xikmad leh, sida sheekooyinkan uu Jamaal Cali Xuseen ku soo ururiyey Diiwaankan qiimaha leh. Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan: Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa, Bare Sare (Professor) ka ahaan jirey Jaamacadda Boston (USA), Xeel-dheere Cilmi Nafsiga Diiwaanka Qosolku waa buug aad ka baranayso in ka badan inta uu kaa qoslinaayo, Jamaalna waa ninka keliya ee qori kari lahaa.
Naadiga Akhristeyaasha Hargeysa: Akhristayaashii Maanta; Qorayaashii Berito Qosolka iyo maadda ka sakow xigmad baa dhex ceegaagta sheekooyinka buuggan ku urursan badankooda. Jamaal Cali Xuseen waxa uu sida "bamka" qarxinayaa hibo ilaa yaraantiisiiba ku lammaanayd oo ah alooska jawi kaftan ka buuxo iyo curinta sheekooyin ay dhegtu jamato, waana bartaas halka uu “Diiwaankan Qosolku” ku biyo shubayaa.
Maxamed Baashe Xaaji Xasan: Suxufi Qoraa ah, London Waa Buug dadka waxna baraya, kana qoslinaya. Jamaal wuxuu cilmiyeeyey oo uu waxbarasho ka dhigay qosolkii si farshaxannimo leh isagoo dadka u baraya in sida maahmaahda oo kale meesha uu Qosolku ku habboon yahay loogu adeegsan karo. Buuggan “Diiwaanka Qosolku” waa buug aad loogu baahnaa, aadna looga heli doono! Cabdi Haybe Laambad: Fannaan, Jilaa, Hal-abuur, Mu’alif, iyo Ka-qosliye weyn Qarniyadan is daba maray
“Kaalaya aan wada qosollee”! Taas waxa dhiirri gelinaya Ururka Dhaqanka iyo Fanka Soomaalida ee KAYD. London – April 11th - Saturday Location: Queen Mary University, Arts Theatre, Mile End Road, London E1 4NS Time: 14:00 Duhurnimo Direction: Nearest Tube: Mile End Station, District and Central Lines Buses: 25, 205 and 309 Contact persons: Ayan Maxamuud: 0790371-2949 Maxamed Baashe: 07852239595 Faysal Aw-Cabdi: 07931892659 Bristol – April 12th – Sunday Location: St Pauls Community Sports Academy Time: 15:00 Afternoon Address: New Foundland Street, Bristol, BS2 9NH Copyright � 2009 Wardheernews.com